Ukuthenga imbewu yeCannabis Online Ngokomthetho - Umhlahlandlela Olula WeMbewu Yensangu
Ukuthenga Imbewu ye-Cannabis Online
Kusemthethweni yini ukuthenga imbewu yokhula online?
Ungathenga kanjani imbewu ye-cannabis ngokusemthethweni?
Ukuthenga imbewu ye-cannabis online kungahle kube semthethweni ngokuya ngokuthi uhlala kuphi, noma kungahlukaniswa umthetho - le ndatshana, ividiyo engenhla ne-pod ephonswe ngezansi, ifingqa umlando wokuthengiswa kwembewu ye-cannabis online .. Izizwe zivuselela imithetho yazo yensangu noma ye-cannabis njalo - ngokwesibonelo, e-Illinois ikhaya elisemthethweni likhula ngoJanuwari ka-2020 kwiziguli zalo zezokwelapha. I-Illinois iphinde yavumela ukuthengiswa kwembewu ye-cannabis ngama-dispensaries. Nakhu okucashunwe okuvela emthethweni we-cannabis wase-Illinois okuvumela imbewu ye-cannabis, engathengiswa yi-dispensary ngewebhusayithi yabo.
Kusemthethweni yini ukuthenga imbewu yokhula
ISIQONDISO ESIQALILE: Ikhaya Lokukhula I-cannis e-Illinois
ISIQONDISO ESIQALILE: I-Wet Trim noma i-Dry Trim Cannabis?
Ufuna ukuvula ukukhula okusemthethweni
Okufanele Uyibhekele Lapho Uthengela Imbewu ZaseCannabis Online
Ukuthenga imbewu ye-cannabis online kufanele kube lula. Uya kuwebhusayithi, bese ukhetha kusuka ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemikhiqizo, bese uzitholela umkhiqizo omuhle kakhulu. Kuzwakala kukuhle, kepha akulula.
Uzothola izindawo eziningi ezibanga abantu ku-inthanethi uma uqhubekela phambili lapho usesha imbewu ye-cannabis online. Lawa mawebhusayithi akhuthaza imbewu ye-cannabis nemiphumela yawo enamandla, kepha isizinda seziza sinomthunzi kakhulu.
Ngemuva kwalokho, ungazithola kanjani imbewu engcono kakhulu ye-cannabis online?
Ungasesha imithombo efanelekile kunoma iyiphi injini yokusesha ye-inthanethi. Kuzoba nenqwaba yamawebhusayithi ahlukahlukene wonke ajabule kakhulu ngokuthengisa imbewu yakho ye-cannabis online futhi abaningi bazothi isemthethweni. Esihlokweni esilandelayo, uzofunda ukuthi ungayithola kanjani indawo ekahle yokuthenga imbewu ye-cannabis nokuthi ungayisebenzisa kanjani kahle lapho unazo ekhaya.
Kungani Imbewu ZesiCanabis Zidume Kangaka?
Imbewu zeCannabis zithandwa online ngoba awukwazi ukuzithola ezitolo ezijwayelekile. Izitolo eziningi ze-dispensaries nezitolo ze-cannabis zithengisa kuphela inani elincane lemikhiqizo ye-cannabis, futhi imbewu imvamisa ayikho kulolo hlu.
Yini okufanele uyenze ukuze uthole imbewu engcono kakhulu ye-cannabis online?
Ukuthola imbewu enhle kakhulu ye-cannabis online, kufanele uhlole amawebhusayithi alandelayo:
Imbewu Yenkosi yasebukhosini
Kunemiphumela emi-3 ephezulu evela kunjini yokusesha yakwaGoogle mayelana nalo mbuzo obuzwa izinkulungwane zezikhathi ngenyanga, yebo nguwe - ngizama uku thola ulwazi oluthe xaxa ngokuthengiswa kwembewu okusemthethweni kwe-cannabis online.
Kwesinye isikhathi, uzothola izinhlobo ezingandile nezingajwayelekile, kepha kufanele njalo ufune imithetho yembewu ye-cannabis esifundazweni sakho esithile. Lapho uthola izinhlobonhlobo zembewu ezingagunyazwa ngokusemthethweni, kuwuphawu lokuthi uqhubeke futhi uthole ezinye izinhlobo zezimbewu ezisemthethweni ezweni lakho.
Kulula ukuthenga imbewu ye-cannabis online lapho unolwazi lwangaphambilini ngemithetho yangempela. Ezifundweni eziningi, kungenzeka ukuthola uhlu olusemthethweni lwezinhlobo ze-cannabis ongazithenga noma uzithengise. Sebenzisa umhlahlandlela ofanele lapho usesha imbewu ye-cannabis online.
Ngabe Imbewu ZesiCannabis Izokwenyuka Ngokwentengo?
Kuyacaca ukuthi kungani enye imbewu ye-cannabis inentengo ephezulu emakethe. Lezi yizinhlobo ezingandile, futhi izimiso zazo zinobuqili kakhulu, yingakho iningi lembewu libiza kakhulu.
Cishe uzothola lezo ezinokuqukethwe okuphezulu kwe-THC lapho uhamba isinyathelo esisodwa ngokuqhubekayo futhi udala uhlu lwembewu yakho oyithandayo ye-cannabis. Uma okuqukethwe kuphakeme ngaphezu kwe-0,3%, kuzofanela uye kolokuthola okunye.
Endabeni yokuthi uthole imbewu etholakala kakhulu kwizifundazwe ezahlukahlukene, amanani azoba ngesilinganiso. Endabeni yezinhlobo ezithile, uzothola ukuthi intengo ingakhuphuka uma isidingo siphezulu ngesikhathi sokucinga kwe-inthanethi imbewu ye-cannabis.
Ukuthola intengo enhle kakhulu kanye nekhwalithi enhle kakhulu ngesikhathi esithile, kufanele ugxile ezinhlanyelweni ze-cannabis ezilungele ukukhula kwensangu futhi zibe nentengo efanelekayo ngasikhathi sinye. Lezi zinhlobo zembewu zitholakala ku-inthanethi, futhi uzothola izinhlobo eziphelele zezidingo zakho.
Ungayikhetha Kanjani Imbewu Engcono Kakhulu Cannabis?
Izinhlobo ezingaphezu kuka-3000 zembewu ye-cannabis zikhona emakethe njengamanje. Lezi zinhlobonhlobo zitholakala kakhulu ezindaweni lapho ungasabalalisa khona imbewu ngokusemthethweni. Kwezinye izifundazwe, kungokomthetho ukuthenga, ukuthengisa kanye nokusabalalisa imbewu ye-cannabis ngokugunyazwa okuyikho kwemibhalo yokuphatha imbewu ye-cannabis.
Uma ufuna ukuqhubeka nokulandela imiyalo ye-cannabis, ungathola amakhadi wensangu noma wokuzijabulisa ukuze usebenzise umkhiqizo wokugcina. Ngokwamandla akho onke - hlala uhambisana nemithetho esesimweni sakho.
Imbewu ye-canannabis online zingena ngamaphakeji amaningi. Elinye lamaphakheji ashibhile kakhulu yiphakethe yembewu eyi-10 egcwele ngokuqapha nokunakekela. Ngasikhathi sinye, ungathenga amabhokisi amaningi bese uthola izinhlobo ofuna kakhulu. Uma ezinye zezinhlobo zembewu zingalungile, ungafaka isicelo sokubuyiselwa kwemali bese unamathela ezincomeni ezingeziwe zokuthenga nokuthengisa imbewu ye-cannabis.
Ingabe Izingulule ZaseCanabis Zisemthethweni Ngokomthetho We-Federal?
Leli yigama elisemthethweni lobuciko elithi "marihuana" ku-federal level ngaphansi koMthetho Okulawulwayo Wezinto - Kugcine ukubuyekezwa: Juni 21, 2020
Esikhathini sezinketho eziningi kakhulu, ungaya ngokuthola okungcono kakhulu bese ubheka kuphela imikhiqizo eyaziswa kakhulu emakethe. Lapho uthenga imbewu ye-cannabis online, bheka imbewu efanelekile ukukhula kwensangu, futhi ube nentengo ephelele yesabelomali sakho uma kukhulunywa ngembewu ye-cannabis enikela online.
Ufuna ukuthenga imbewu ye-cannabis online, kodwa ukwenze ngokusemthethweni - phela, ayikho indlela yokuthi wena - noma omunye umuntu - obefanele ukuthola izeluleko zomthetho kusuka esiteshini se-YouTube - kodwa abantu balokhu bengifonela bebuza ukuthi bakwenza kanjani lokhu ngokusemthethweni e-Illinois, futhi wonke umuntu osezweni elilandelayo naye uzokufuna le mininingwane, ngakho-ke bekubonakala sengathi sisiqephu esihle…
Abantu Bayithola Kanjani Imbewu YaseCannabis Embusweni Wakho
Ake sixoxe ngokuthi ungayenza kanjani ingadi yakho ikhule - ukuthandwa futhi kubhalisa wonke umuntu. Khumbula ukuhlola umthetho wakho wezwe maqondana nokukhula ekhaya. Lapha e-IL, abaguli bezokwelapha kuphela abangakhula. Bangazithenga imbewu, kepha uzithathaphi - bese ulenga kuze kube sekupheleni futhi uzofunda ukuthi izitshalo ze-cannabis zingena kanjani ngokomthetho ezifundeni ezintsha ezisemthethweni naphezu kokuba yisigebengu ngosuku lwaphambilini, noma ubugebengu kuze kube yilapho uthola ilayisense futhi ungenayo izwe likunikeze izitshalo.
Sizoxoxa ngezinto ezi-5 okufanele sicabange ngazo lapho uthola imbewu yakho ye-cannabis yekhaya lakho lezokwelapha likhula - noma ukusetshenziswa kwabantu abadala ekhaya kukhula uma isimo sakho sikuvumela lokho - futhi sonke sithandaza IL kanye ne-WA ngokusemthethweni ngokusemthethweni kungekudala. Kepha qaphela ukuthi ukukhula kwasekhaya kusetshenziselwa abantu abadala - imvamisa i-DEA ingena - njengaku-CO ngemuva kokukhula kwabantu abadala kube umthetho futhi i-CO ithole ukuqashelwa komkhiqizo ezifundeni eziseduze.
Okusilethela into yokuqala okufanele siyicabangele lapho uthenga imbewu -
izindaba zokuphoqelela Izinkinga Zokuthenga Izikhwebu zeCannabis online
Musa ukweqa imingcele yakho. Udinga ukufinyelela ngokuphepha emithini yakho futhi hhayi noma yiziphi izinkathazo - njengoGlenn Keeling, kuye kwenzeka kuye ukuthi wayenakho, ake akhule futhi. Izwe libeka imikhawulo ethile - inamathele kubo. Isibonelo, i-IL ivumela iziguli ukuthi zikhule izitshalo ezi-5 kumndeni ngamunye ezingabinaziguli - hlola imithetho yendawo yakho bese ubona ukuthi zingaki izitshalo ongaba nazo futhi unamathele kuyo kungakhathalekile ukuthi uthenge imbewu engakanani.
Uyithenga kuphi futhi i-Cannabis - noma imbewu yensangu?
Emthethweni omusha wase-Illinois wokusebenzisa abadala - bathi ungathenga imbewu kuma-dispensaries, kepha awukwazi ngisho nokuthenga imbali kwamanye ama-dispensaries. Kepha uma lokhu kungu-2022 uma ubuka lokhu, kungenzeka ukuthi silungile, kepha manje izwe lakho seliphelelwe yi-cannabis - futhi uvumele ikhaya ukuthi likhule uma uhamba uyothenga imbewu i-dispensary, kepha akukho.
Ngabe imbewu ichazwa kanjani - futhi kungani ungabonakala nje ukuthi uyithenga kusuka kunoma iyiphi indawo kwi-inthanethi? Umthetho olawulwa yizinto ezilawulwa phansi uchaza insangu njengazo zonke izingxenye zesitshalo se-cannabis ukuthi ziyakhula, noma cha, kanye nembewu yalokho. Umthethosivivinywa wepulazi lowe-2018 wawugunyaza ngokusemthethweni i-hemp ukuyenza kuphela yezingxenye zesitshalo se-cannabis kanye nembewu yayo ngamapulangwe - noma izingqimba - ezinamandla angaphezu kwe-0.3% THC uma ukhule ngaphansi kwezimo ezifanele.
Imithetho yoMbuso ivame ukucacisa ukuthi ubani ongathengisa ukuthi yini, kubandakanya imbewu nama-clones. Ngakho-ke ezinye izifundazwe kufanele zivumele abalimi bazo ukuthi bathengise imbewu yabo online, noma mhlawumbe iCanada iyenza - kepha eYurophu, e-Amsterdam noma eBarcelona ngokwesibonelo - mhlawumbe uzothenga lezi zinhlamvu njengezikhumbuzo.
Akukhathalekile - kodwa kuzokhombisa abaphethi ukuthi abayigcini imithetho yabo yensangu - ngathi abayenzi eCalifornia, lonke ugu olusentshonalanga - inhlokodolobha yezwe - izwe elikhulu lase-Illinois futhi ngethemba lokuthi isimo sakho sisanda kungena ku-inthanethi.
Nazi izindawo ongazithengela zona imbewu online -
Futhi, awutholi izeluleko zomthetho kusuka ku-YouTube - kepha nazi izindawo ezithengisa imbewu: eYurophu
Abahlinzeki beMbewu ye-European Canannis
Imbewu Eluhlaza Endlini
Abahlinzeki beMbewu yase-US Abangabanikazi
I-Southern Humboldt Imbewu Ehlanganisiwe
Izakhi zofuzo zeMephisto.
Zingaki futhi uluhlobo luni lwembewu ye-cannabis okufanele uthenge?
Mfowethu, angikuniki izeluleko zomthetho futhi ngokuqinisekile angikuniki izeluleko ezikhulayo. Ungafuna ukuthambekele futhi uhambe nembewu ejwayelekile, ukuthi uzilonde futhi uziqeqeshe kuyo yonke le nkathi yezithombe nezimbali ukuze uvune, noma ungahle uthande ukweqa okunye kwalokho uhambe nembewu yesifazane - noma mhlawumbe yakho Isiqalo kwiziqalo zakho zokuqala.
Bheka futhi lawo mabhange embewu - ukuxhumana kumazwana ukuze uthole konke ochwepheshe bezakhi zofuzo ngokwabo abazokutshela kona ngembewu yabo - bese ubheka ama-akhawunti abo e-Instagram ekhasini lesimbali eligulayo ukuthi ekuhlanganiseni konyaka ka-2020 kubizwa ngomlilo.
Manje ungazithola ubuza -
Ingabe ngizobanjelwa imbewu ye-cannabis noma imbewu yensangu?
Cabanga ngento eyodwa - futhi uma uyayithanda - shaya ukuthandwa futhi ubhalise. Ngabe iyiphi indlela isijeziso esikhuphuka ngayo ngokuphathwa kwensangu noma insangu? Isisindo. Imbewu ye-cannabis ikala malini?
Kakhulu, kuncane kakhulu. Kancane kanjani?
isisindo sembewu ye-cannabis kuphela amagremu ayi-1.5-2.5 imbewu ngayinye eyi-100.
Imbewu ye-canabis ilula kakhulu
Soo .. cabanga ngakho - ILungelo lokutholwa linelungelo lamagremu ayi-10 noma ngaphansi ngo-2016 - ngakho-ke uzodinga amakhulu ezinhlanyelo zembewu ngalokho.
Kubeka engcupheni ephansi nje.
Isiphetho sokuthenga imbewu ye-cannabis online
Okusiletha esiphethweni - futhi manje impendulo yokuthi kanjani izitshalo ze-cannabis ngomlingo zingena ezifundeni ezintsha ezisemthethweni naphezu kokuba yisigebengu ngosuku olwedlule.
Siyabonga ngokunamathela ngokuzungeza - njengokuthi & ubhalise uma ukuthandile lokhu - ngoba uzothola izindaba zezindaba ezisemthethweni ze-cannabis - njalo ngomshado ngo-2 pm.
Imithombo yeCannabis Seeds Online:
Ungangilahli - kwakuyiphutha le-inthanethi - imininingwane mayelana nembewu ye-cannabis ingatholakala cishe noma kuphi ku-inthanethi:
Ukuvuselelwa Kwemboni ye-Cannabis nge-Grown In
by Lauryn | Jul 28, 2020 | I-2020 Federal Cannabis Legalization Marijuana Policy Project, Ukuvuselelwa Kokubumbeka Kwemboni ye-Cannabis, I-Cannabis Legalization 2020 Marijuana Law Reform Keith Stroup NORML, Izindaba ze-Canannis Legalization, Ukuvuselelwa Kwezindaba
Ukuvuselelwa Kwemboni yeCannabis neGrown In Brad Spirrison of Grown Kujoyina nathi ukuxoxa ngezinto ezenzeka embonini ye-cannabis. Intatheli kanye nomsunguli weGrown In, uBrad Spirrison ukhuluma nathi ngezombusazwe zaseChicago nekusasa le-cannabis e-Illinois. Yilalele kuPodCast noma ...
I-Illinois Cannabis News ngeChillinois neCannaKweens
by Lauryn | Jul 27, 2020 | I-2020 Federal Cannabis Legalization Marijuana Policy Project, Ancillary Cannabis Amabhizinisi, I-Cannabis Legalization 2020 Marijuana Law Reform Keith Stroup NORML, Izindaba ze-Canannis Legalization, I-Illinois Cannabis News ngeChillinois neCannaKweens, izindaba zomthetho, Imithetho, Ukuvuselelwa Kwezindaba, Imithetho Yezwe
I-Illinois Cannabis News ngeChillington Illinois izindaba ze-cannabis uhlobo lwe-limbo manje. Abaningi balindele ukuzwa eMnyangweni Wezolimo ukuthi izicelo zabo zamalayisense ziyokwamukelwa noma cha. UJustine Warnick noCole Preston kusuka ...
I-Flash Freezing Cannabis ne-Cannabis Sublimation
by Lauryn | Jul 27, 2020 | Izindaba ze-Canannis Legalization, I-Flash Freezing Cannabis ne-Cannabis Sublimation
I-Flash Freezing Cannabis ne-cannabis Sublimation Flash cannabis cannabis kanye ne-cannabis sublimation zikhula ngokuthandwa phakathi kwabathandi be-cannabis. Imikhiqizo efana ne-Space Weed isebenzisa lobu buchwepheshe ukwelapha i-cannabis yabo esivame ukuveza imbali eqinile. ULuc ...
by Lauryn | Jul 14, 2020 | ICannabis Autism Alliance yase-Ohio, izindaba zomthetho, I-Marijuana yezokwelapha, Ukuvuselelwa Kwezindaba, Iziguli Ziphelelwe Isikhathi
I-Cannabis ne-Autism Cannabis ne-autism - izihloko ezimbili ezinesihluku ezidinga ukunakwa ngale ndlela. Ngenkathi kukhona izifundo ezenzelwe futhi eziphikisana nokusetshenziswa kwe-cannabis ukwelapha izimpawu ze-autism, abathengi abaningi bakholelwa ukuthi i-cannabis yiyona ndlela engcono nephephe kunazo zonke yokwelashwa. I-Tiffany ...
Imithetho YaseCanada Adult-Use Cannabis
by Lauryn | Jul 14, 2020 | I-2020 Federal Cannabis Legalization Marijuana Policy Project, I-Cannabis Legalization 2020 Marijuana Law Reform Keith Stroup NORML, Izindaba ze-Canannis Legalization, I-cannabis ku-Ballot, Imithetho YaseCanada Adult-Use Cannabis, Ummeli wasePennsylvania Cannabis uPatrick Nightingale, Imithetho Yezwe
Imithetho ye-cannabis yasePennsylvania Adult-Use Cannabis Imithetho yabantu abadala yokusebenzisa insangu. I-Pennsylvania ibone i-cannabis yokuzijabulisa (yabantu abadala) ifika esimeni sabo uma kudlula i-SB 350. USenator Leach wasePennsylvania usijoyina ...